पुरुषका ७ यी चिज जसलाई दिन्छन् महिलाले ध्यान
महिलेले कस्ता पुरुषलाई ध्यान दिन्छन् होला ? तपाईं त्यसबारे सोचेर आफूलाई त्यही अनुकुल बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ होला ।
स्वास्थ्य देखि फिटनेशसम्म महिलाले बढी ध्यान दिने विषय हुन् । आखिर कस्ता पुरुष चाहन्छन् महिला ?
पेटः अधिकांश जसो महिलाले फिट खालका पुरुषलाई बढी ध्यान दिन्छन् । उनीहरु पेटमा बोसो जमेर भुँडी बाहिर निस्केका पुरुषलाई त्यति मन पराउँदैनन् । त्यसैले आफू फिट हुने पुरुषहरुलाई जरुरी छ ।
स्वस्थ कपालः घना तथा स्वस्थ कपाल भएको, कपालमा चायाँ नभएको पुरुष महिलाको रोजाइमा पर्दछ । कपाल काट्ने हेयर स्टाइल पनि केटीको रोजाइमा हुने गरेको छ ।
दाँतः मन्द मुस्कान तथा चम्किलो र सेतो दाँतयुक्त पुरुष महिलाको रोजाइमा पर्दछ ।
स्टामिनाः महिलाहरु यस्तो पुरुषमा धेरै ध्यान दिन्छन् जसको स्टामिना वा शक्ति राम्रो छ । अलिक बलवान र कुनैपनि काम फूर्तिसँग गर्नसक्ने पुरुष महिलाको पहिलो रोजाइमा पर्दछ ।
खुट्टाको सफाइः धेरैको यसमा ध्यान नपुग्न सक्छ । तर महिलाहरुको ध्यान पुरुषको खुटको सफाइमा पनि पुगेको हुन्छ । सफाचट पारेका, गन्ध नआउने तथा सलक्क परेका पाइताला सहितका खुट्टायुक्त पुरुष महिलाको रोजाईमा पर्दछ । भदौ ९, २०७४ मा प्रकाशित